배틀그라운드 အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - APKTom
ဒေါင်းလုပ် XAPK（737.9MB） ယခင်ဗားရှင်း
▶ Erangel-3th နှစ်မြောက်ဂီတ Theme Mode ကို◀
လက်နက် - Moe-River (Erangel, Biki)
ယာဉ်အသစ် - မော်တော်ယာဉ်အသစ် - Mountain Glider (Eran) ဂျယ်လ်)
▶ slim package Slim Package function မှတစ်ဆင့်သင်ဂိမ်းကိုခံစားနိုင်ရန်ကစားနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည်။
▶ game နိဒါန်း◀
Baggrerground Mobile သည်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအမျိုးအစား Mobile ဖြစ်သည်။ စစ်မြေပြင်တွင်သေနတ်များနှင့်တိုက်ခိုက်မှုအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည် သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအနိုင်ရသူနဲ့နောက်ဆုံးအနိုင်ရသူကိုလုပ်ရမယ်။
အဖွဲ့၏စွမ်းဆောင်နိုင်သည့် Multrier ဂိမ်းသည်ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်ရာသီတိုင်းကိုရာသီတိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
▶ subscription function description ဖော်ပြချက်◀
1 ။ Subscription Condression ကာလနှင့်စာရင်းပေးသွင်းသည့်ကာလ
2 ။ subscription deskbr> subscriptions ကိုမျိုးစိတ်များ "အထွေထွေလစဉ်ရည်းလစဉ်အရည်" နှင့် "ဇိမ်ခံလစဉ်အရည်" တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ 1) စာရင်းသွင်းပြီးနောက်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ, ကြေးပေးချိန်တွင်စံသတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုလုံးကိုစံသတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုလုံးလျော်ကြေးပေးနိုင်သည်။
2) Subscription ပြီးနောက် subscription သည်အလိုအလျောက်တိုးချဲ့လိမ့်မည်။ အကယ်. သင်စာရင်းသွင်းသည့်ကာလအတွင်းစာရင်းသွင်းခြင်းအားသင် cancription ကိုပယ်ဖျက်ပါက0န်ဆောင်မှုပေးသည့်ကာလကိုရပ်ဆိုင်းပြီးနောက်လစဉ်အထူးအခွင့်အရေးကိုမခံစားနိုင်ပါ။
3) ပုံမှန်လစဉ်အရည်အခွင့်အရေးများကိုချက်ချင်းအဆင့်မြှင့် တင်. နေ့စဉ်အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါသည် ပန်းပုတစ်ပုဒ် (သင်ဒုံးကျိတ်သေတ္တာတစ်ခုသို့မဟုတ်စစ်ပွဲချောင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားသည့်အခါပွင့်လင်းသောအဖုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်စစ်ပွဲချောင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်သည့်အခါပွင့်လင်းသောအရာတစ်ခုတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အခါဖွင့်လှစ်ထားသည်), အထူးသေတ္တာလျှော့စျေးလျှော့စျေး -30UC 1 ကိုရနိုင်သည်။
4) အဆင့်မြင့်သောလစဉ်အရည်များကိုချက်ချင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူး box လျှော့စျေး - 60U6 1, နက်နဲသောအရာ Box လျှော့စျေး - 60, 666 လျှော့စျေး - 106 1,
5) နေ့စဉ်, အပတ်စဉ်ဆုများသည်ဂိမ်းနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါရွံရှာခြင်းနှင့်လက်ခံမှုရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ရရန်လက်ခံမှုအရေအတွက်ကိုနေ့စဉ်ရယူသုံးစွဲခြင်းမရှိပါ။ (UC လျော်ကြေးငွေအရ) သည်5ရက်အထိလက်ခံသူများထံမှ5ရက်အထိမဖြစ်နိုင်ပါ။0င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကာလကုန်ဆုံးချိန်၌ပင်၎င်းကိုမရရှိခဲ့ပါကဖျက်ဆီးခံရသည်။ )
3 ။ Subscription Auto extension ဖော်ပြချက်
•0န်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် Google Play Store အကောင့်မှတဆင့်အလိုအလျောက်တိုးချဲ့ပြီးအလိုအလျောက်တည်ရှိပြီးအလိုအလျောက်အခြေချသည်။ subscription service ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် Google Play Store အကောင့်တည်ဆောက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစာမျက်နှာရှိ Autoid Subscription function ကိုသင်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ •သင်၏ပုံမှန်ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းတိုးပါကပုံမှန်ငွေပေးချေမှုထုတ်ကုန်များကို0ယ်ယူရန်သင်အသုံးပြုသောအခြေချနည်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကောက်ခံပါမည်။ • subscription ကာလ extension ကိုစစ်ဆေးပြီး subscription ကာလ extension ကိုစစ်ဆေးပါ။
subscription ကိုဖျက်သိမ်းရန်သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင် Google Play Store ကိုဖွင့်ပါ။ ---> ပုံမှန်ငွေပေးချေမှု "တွင်" Menu "ကိုနှိပ်ပါ -> ပုံမှန်ငွေပေးချေမှု -> ပုံမှန်ရွေးချယ်ပါ သငျသညျကိုပယ်ဖျက်ရန်ချင်ငွေပေးချေမှု ---> ---> သင်ဟာ subscription ကိုပယ်ဖျက်နိုင်သည် "" Subscribe Cancel "ကိုနှိပ်ပါ။
ဓာတ်ပုံ / မီဒီယာ / ဖိုင် - ခွင့်ပြုချက်ကိုငြင်းပယ်ခံရခြင်းသင်ဂိမ်းစခရင်ရိုက်ကူးမှုကိုငြင်းပယ်သောအခါသင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုမသုံးနိုင်ပါ ဝေမျှခြင်း, တင်ခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်း။
အသံဖမ်းခြင်း / ကစားခြင်း - ခွင့်ပြုချက်များနှင့်စကားပြောခြင်း, မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမရှိပါ။ သင်သဘောမတူပါက optional permissions များကိုသင်သဘောမတူပါ ။ လက်လှမ်းမီပြီးတဲ့နောက်အောက်မှာပြထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုသင်ပြန်လည်စတင်သို့မဟုတ်ထုတ်ယူနိုင်သလား။
- Android 6.0 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းဗားရှင်း
Access Permissions By - Settings> Apps> နောက်ထပ် (Settings settings settings> app settings> app settings> app settings> app cornery> Access> Select> Access / Access Control accessory ကိုရယူပါ။ Application များ: Settings> application များ> Select Settings> Applications> applications> access access> access access> access access> selective selection selection selection
Android 60 ဗားရှင်း
service service ◀
: // ကဖေး။ naver.com/battleGroundsmobile/1363325
BR> BR> ဆက်သွယ်ရေးအရောင်းစီးပွားရေးအစီရင်ခံစာ - Gyeonggi-Do Seongnamnam မြို့တော်ခန်းမ
ဘာအသစ်လဲ 배틀그라운드 1.8.0
[에란겔-3주년 뮤직 테마 모드]
[모신 나강, 모터 글라이더 신규 등장]
OMG!! If you move, you die!! PUBG Squid Game!!
매번 똑같은 총기 파츠, 똑같은 총 조합은 이제 그만!
배틀그라운드 시청자 저격 레전드ㅋㅋㅋㅋ(100% 리얼 상황)
어린이용 배틀그라운드를 해봤습니다ㅋㅋㅋㅋ
'언디셈버' 오픈날 25시간 점검.. 역시 K게임.. [언디셈버 점검, 배그 무료화, 배필2042, 이브 리메이크]
Clicker 2021 Idle RPG: Juggernaut Champions
Myominaung Bang kok